Naqshadeynta & Dalbashada Tayada Sare ee Macaamiisha oo La Sameeyay Dahab Fiican | Popular Jewelry
U rogida fikradaha xaqiiqda Tan iyo 1988
In kabadan 28 sano oo ah khibrad warshadeed, shirkadeena waxay uxaratay macaamiisheena macaamil badan oo tayo sare leh oo tayo sare leh. Ugu Popular Jewelry, waxaan ku faanaa naqshadeena waxaanan aaminsanahay in dariiqa loo maro dhammeystirka shay kasta inuu sidoo kale muhiim yahay sida dahabka laftiisa. Laga bilaabo daqiiqada aan ku tuurano birta naxaas laga sameeyay, illaa iyo hadda waxaan ku dabaqnaa gabal xayeysan oo cad cad ah — ma ah ilbiriqsiyo falsafadeed farshaxan oo lumaya. Kooxdayada takhasuska leh ayaa si buuxda ula shaqeyn doona si ay u qaabeeyaan dahabka aad ku riyoon jirtey. Laga soo bilaabo qaab-magaceedyo, suumanka suunka laga xirto, ilaa ay ka buuxaan dahab iyo dheeman - waxaan fikradahaaga u beddeli doonnaa bir bir qaali ah - waxaan u aragnaa inuu yahay mid u gaar ah King Midas taabasho.
Naqshadeynta & Abuurista Dahabkaaga
Guud ahaan, waxaan kugula talineynaa inaad tixgeliso su'aalahan soo socda:
1. Waa maxay nooca bir qaali ah oo aad xiisaynaysaa inaad ka samayso qaybta?
Tusaale: (Platinum, Dahab [24K, 22K, 18K, 14K, 10K], Qalin)
Tusaale: (Dahab Dahab ah, Dahab Dahab ah, Dahab cad, Madoow, iwm)
(Dhamaan qaybaha / qaybo gaar ah)
3. Nooca dhadhanka (yaasha) ama qurxinta / dhammeynta (yaasha) aad jeceshahay qaybtaada:
Tusaale: Finish Polish, Satin Finish, Finish Burush, Hammered Finish, Wire Brushed, Sandblasted Finish, iwm.
4. Dhinacyada (waxay noqon kartaa qiyaastii) gabal
Tusaale: (Dherer x Ballac x x Qotodheer) milimitir ama inji
Haa / Maya
Hadday Haa tahay:
• Waa noocee dhagax qaali ah?
• Waa immisa dherer kasta oo qanjir ah?
• Xageed jeceshahay in laga dhigo?
• Qaab noocee ah ayay warqad u qorayaan?
Tusaale: Xarafka Xirmooyinka / Qoraalka
• Maxay oranayaan?
Tusaale: Taariikhaha, magacyada, magacyada, xigashooyinka, iwm. (Fadlan la soco meel bannaan oo bannaan oo oggol oo le'eg dahabka aad dalbaneyso)
Waxyaabaha ay ka sameysan yihiin waxyaabaha loo yaqaan 'grills Custom' waa caado sidii gogosha caadiga loo helo (nasiib wacan inaad hesho qof ilkahaaga u dhigma!) Si aad u hesho macluumaad dheeri ah oo ku saabsan samaynta ilkaha dahabka ah ee loo yaqaan 'Grills', waxaad booqan kartaa boggayaga u go'ay.
Si annaga aan si dheeraad ah kaaga caawino, waxaan si adag kuugu soo jeedineynaa inaad timaado goobteenna NYC ee Chinatown. Soo qaado fikradahaaga (yada) iyo moodello kasta oo la xiriira, sawirro ama sawirro sidan oo kale ah. Intaas waxaa sii dheer, waad wici kartaa (212) 941-7942 ama emayl noogu soo dir at info@popular.j Jewelry si aad u soo gudbiso baaritaan ama aad u codsato xigasho. Waxaan sugeynaa inaan abuurno wax gaar ah adiga.